बन्दिपुर गाउँपालिका - विकिपिडिया
(बन्दीपुर नगरपालिका बाट पठाईएको)
बन्दिपुरबाट देखिने पहाडी दृष्य
बन्दिपुर गाउँपालिका नेपालको गण्डकी प्रदेश मा पर्ने तनहुँ जिल्लामा अवस्थित एक गाउँपालिका हो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९को बजेटमार्फत् मुलुकमा ४१ नयाँ नगरपालिका थपिंदा बन्दिपुरलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । यसलाई नगरपालिका घोषणा गर्दा धरमपानी र बन्दिपुर गाउँ विकास समितिहरू समावेश गरिएका थिए । विसं २०७३ सालमा नेपालको नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम गर्दा साविकको बन्दिपुर नगरपालिकामा घाँसीकुवाका (१,९) वडाहरू, र केशवटारका (१,९) वडाहरूलाई समेटेर बन्दिपुर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । बन्दिपुर गाउँपालिकाको केन्द्र साविक बन्दिपुर नगरपालिकाको कार्यालय रहको छ । बन्दिपुर गाउँपालिकामा ६ वडाहरू रहेका छन । बन्दिपुरको कुल क्षेत्रफल १०२ वर्ग कि.मी. छ । बन्दिपुर नेवारी कला र संस्कृतिकोलागी पनि प्रसिद् छ।
गण्डकी प्रदेश स्थित तनहुँ जिल्ला साविकको बन्दिपुर नगरपालिकामा घाँसीकुवाका (१,९) वडाहरू, र केशवटारका (१,९) वडाहरूलाई मिलाएर बन्दिपुर गाउँपालिका बनाइएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८का अनुसार यी ठाउँहरूको जनसङ्ख्यालाई जोडेर बन्दिपुर गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या २०,०१३ रहेको छ ।
बन्दिपुर तनहुँको पुरानो सदरमुकाम सहर हो । यो शहर मोटर यातायातको सुविधा नहुँदा पश्चिम पहाडको मुख्य व्यापारीक नाकाको रूपमा रहेको थियो । तनहुँ, कास्की, लमजुङ र गोरखाको लागि दक्षिणबाट सामान ल्याउने र पहाडी भेगबाट सामान दक्षिण पठाउने मुख्य स्थलको रूपमा यो नाकाको विकास भएको हो । तनहुँ जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा रहेको यस ठाउँबाट विसं २०२५ सालमा उक्त सदरमुकामलाई दमौली सारिएको थियो ।
नेवार संस्कृतिमा लिपिएको बन्दिपुरको सहरी संरचना साढे दुई सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । रहनसहन, थिति र संरचनाका साथसाथ प्राकृतिक सौन्दर्य बन्दिपुरका विशेषता हुन् । बन्दिपुर वरिपरिका गाउँमा मगर संस्कृतिको अवलोकन गर्न पाइन्छ । हिमालयको फराकिलो दृश्य बन्दिपुरको विशेषता हो । बजारबाट दश मिनेट परको टुँडिखेलबाट हिमालको हिउँमात्र देखिँदैन, ३०० कि.मी. फराकिलो क्षितिजमा फैलिएका फाँट, पहाड पनि देखिन्छन् ।
बन्दिपुरबाट पूर्वपट्टि भक्तपुरको उत्तरमा पर्ने जुगल देखिन्छ । पश्चिमतिर चाहिँ लाङटाङ, गणेश, गोरखा (मनास्लु, हिमचुली तथा बौद्धसहित), अन्नपूर्ण, धौलागिरि र काञ्जिरोवा हिमाल फेददेखि टुप्पोसम्मै देखिन्छन् । तलतिर मर्स्याङ्दी नदीले बनाएका उपत्यका हेर्दा लाग्छ, बन्दिपुर उपत्यका माथि झुण्डिइरहेको छ ! बन्दिपुरले प्राकृतिक भ्यु टावरको उपमा यसै पाएको होइन ।
बन्दिपुरबाट दुई घण्टा हिँडेर पातालीद्वार वा स्वर्गद्वारी गुफा पुग्न सकिन्छ । यहाँको सिद्ध गुफा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गुफा मानिन्छ । बन्दिपुर वरिपरिका डाँडा हाइकिङका दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिन्छन् । बन्दिपुर प्याराग्लाइडिङका लागि पनि चर्चित छ । ११५० मिटर उचाइमा रहेको भञ्ज्याङ चौतारा, बुरुञ्चे डाँडाबाट ग्लाइडरहरू तल फाल हाल्ने गर्छन् । पोखराका कम्पनीहरूले यहाँको प्याराग्लाइडिङको व्यवस्थापन गरेका छन् । सेती नदीमा राफ्टिंग गर्न दमौली आउनेहरूले पनि बन्दिपुरमा एक दिन बास बस्ने गरेका छन् । मुग्लिनबाट आधा घण्टा जतिमा गाडीमा पृथ्वी राजमार्गको डुम्रेबजार पुगिन्छ । त्यहाँबाट दुई किमि पश्चिममा पिप्ले, जहाँबाट आधा घण्टा मोटर यात्राबाट पुरानो पहाडी सहर बन्दिपुर पुग्न सकिन्छ ।
पहाडी संस्कृति, पहाडी दृश्य र पहाडी पैदल यात्राका लागि बन्दिपुर अत्यन्त उपयुक्त गन्तव्य हो । मंसिरतिर जानुभयो भने हिमाल हेर्दै बन्दिपुरे सुन्तलाको स्वाद लिन पाउनुहुन्छ । मध्यजेठदेखि मध्यअसारसम्म आउने आगन्तुकको बजारमा मानिसले मात्र होइन, बाटैभरि चौबीस जातिका सुनगाभाले पनि स्वागत गर्छन् । बन्दिपुरमा घुम्नको लागि बसोबासको समस्या छैन । टुँडिखेलमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट मात्र छैन, पुराना नेवारी घरहरूलाई पनि मध्यमस्तरको बसोबासका निम्ति उपयुक्त होटलका रूपमा विकसित गरिएको छ । यहाँका कतिपय घरहरूमा खाना र बिहानको खाजा खाने गरी सशुल्क पाहुना भएर बस्न सकिने व्यवस्था पनि छ । बन्दिपुरका प्रमुख आकर्षणहरूमा खड्गदेवी माई मन्दिर पनि एक हो ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=बन्दिपुर_गाउँपालिका&oldid=1067740" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:०१, ९ जुन २०२२ मा परिवर्तन गरिएको थियो।